China Box Cartoning igwe Suppliers na Factory - China Box Cartoning igwe Manufacturers
HTH-120G Ofụri Esịt Automatic High ọsọ Cartoning Machine
HTH-120G nnukwu ọsọ katọn bụ a n'ụzọ zuru ezu akpaka katọn igwe nke nwere ike na-agba ọsọ na elu-gbapụrụ ọsọ na a na-aga n'ihu mode. Igwe nkwakọ ngwaahịa a na-arụ ọrụ kwụsie ike ma tinye katọn 150 kwa nkeji, nke bụ 2-3 ugboro ngwa ngwa karịa ndị na-ede akwụkwọ nkịtị. A na-emechi nkwakọ ngwaahịa na usoro nkwụsi ike, ebe a na-ebelata mkpọtụ na ibu.
Igwe Cartoning nakweere ụdị nhazi atachara akwụsị. Ọ nwere ihe otutu kọmpat imewe na-adaba adaba ohere, na-ekwe ka ndị ọrụ na-nso ngwá ọrụ mfe na ọcha ma ọ bụ dochie mmiri. Ngwurugwu a kwusiri ike nke igwe dum na-eme ka ihe mkpofu daa na ngalaba mkpokọta n'okpuru, na-eme ka ọ dị mfe idebe ọcha. A na-eji igwe anaghị agba nchara igwe ahụ dum ma na-eme ka usoro ụzọ gas na-emechi emechi. Ngwaọrụ ịnya ụgbọ ala dị na azụ ma meghee kpamkpam n'akụkụ onye ọrụ, nke na-ezute ụkpụrụ GMP.
Ibu ibu & Akụkụ
Akụkụ na mm 5713 × 1350 × 1900 (L × W × H)
Ibu ibu n'arọ 2000KG
Mmepụta & Ọsọ
Ngwa ngwa mmepụta mmepụta 120-170 katọn / min （dabere na ngwaahịa）
Grammage N'etiti (250-450) g ​​/ m2 (dika odi ya)
Ogologo igbe dị (100-250) mm × (60-130) mm × (20-70) mm(Pụrụ iche size nwere ike ahaziri)
Standard ike ọkọnọ 380V / 50Hz (Enwere ike ịhazi ya dịka ọkọlọtọ countryelectricity standard)
Ike oriri na KW 1.5kw
Oriri ikuku 20m³ / h
Nrụgide Ikuku Na-ejikọ 0.5-0.8MPa
Zụ ＜ 80 dB
* HTH-120G Cartoner na-eme nkwakọ ngwaahịa na usoro na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ na akpaghị aka yana oke ọsọ na teknụzụ dị elu.
* Carton Loader Conveyor Belt bụ 1600mm n'ogologo, na-echekwa oge ịtụkwasị katọn.
* Ihe mkpuchi ahụ bụ nke 304 igwe anaghị agba nchara nwere aluminom alloy n'obi iko echebe ụzọ.
* Igwe ahụ gosipụtara njirimara mmadụ na igwe iji dozie usoro ọ bụla nke ọma. Ọ nwere ọrụ nke nlekota ọnụ ọgụgụ nyocha ma gosipụta njehie ọ bụla mgbe ị na-ada ụda.
* A na-etinye PLC na usoro nyocha ngwa ngwa electro iji nyochaa usoro nkwakọ ngwaahịa. Igwe ahụ ga-eme ka ndị ọrụ mata njehie dị ka mgbe akụrụngwa na-apụ na katọn ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere mpempe akwụkwọ. Mgbe nsogbu ndị dị otú a mere, mkpu ga-eme ka onye ọrụ ahụ mata. A na-egosipụta ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa katọrọ na sistemụ a.
* Igwe ihe nkwakọ ngwaahịa na-ejigharị ọtụtụ ngwaọrụ nchebe na akpaka na-akpaghị aka, nke na-enyere igwe aka ichebe onwe ya ma zere mmebi n'oge ọrụ.
* Mgbe ị gbanwere ihe ndị ahụ, ọ dịghị mkpa iji dochie akụkụ ahụ, enwere ike ịgbanwe ya ozugbo site na usoro nhazi. A na-ejigide akụkụ ndị na-agbanwe agbanwe site na njikwa ahụ, nke dị mfe ịrụ ọrụ ma nwee ike ịhazigharị na-enweghị ngwaọrụ.
Ngwa igwe na-arụ ọrụ
Machine Parts Ihe
Ihe nkwakọba ihe
Ire mpịachi ngwaọrụ
Mgba mmiri n’isi
Product mmepụta eriri
Nhazi igbe eletriki
Reducer na Ikuku ikuku
Nzipu gia igbe
Nlereanya na nkọwapụta
Ebe Mmalite ma ọ bụ Ika
PLC Agbatị modul
Mberede Kwụsị Button
igwe oku ọkụ
Hot gbazee mama mama igwe nke ROBATECH
Iji mụtakwuo banyere igwe anyị na ụlọ ọrụ anyị, gaa na youtube ka anyị lee anya. Biko Chekc vidiyo ụlọ ọrụ anyị: https://youtu.be/ofDv6n86l9U
Nke gara aga: HTH-120T Ofụri Esịt Automatic Food Cartoning Machine